Thelekisa izikolo ze-SAT zeeKholeji ezi-11 ze-CUNY
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji zeMatriki ze-CUNY
Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lwee-SAT kwiiCUNY Campuses
Izidingo zokungeniswa kwiikholeji ezili - 11 eziphezulu kwi-CUNY ziyahluka ngokubanzi. Ngezantsi uzakufumana ukuthelekiswa koqhagamshelwano lwamanqaku kumaqela aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekujoliswe kuyo kwelinye lamaziko karhulumente.
I-CUNY SAT Score Ithelekiso (phakathi kwama-50%)
Kufunda IMathematika I-GPA-SAT-ACT
KwiKholeji yaseBharuki 550 640 600 690 ubone igrafu
YaseKrooklyn College 490 580 520 620 ubone igrafu
CCNY 470 600 530 640 ubone igrafu
City Tech I-SAT izikolo ezingafunwayo ubone igrafu
Hunter College 520 620 540 640 ubone igrafu
John Jay College 440 530 450 540 ubone igrafu
Lehman College 450 540 460 540 ubone igrafu
I-Medgar Evers College I-SAT izikolo ezingafunwayo -
Ikholeji yaseQueens 480 570 520 610 ubone igrafu
College College 390 470 420 490 ubone igrafu
Iinqununu zeSAT ezinamandla ziza kubaluleke kakhulu kwiKholeji yaseBharuki kunye neKholeji yaseHunter, iikholeji ezimbini ezikhethileyo kwiinkonzo ze-CUNY. I-City Tech kunye ne-Medgar Evers College baye bavuma ukuvavanya, okokuba irekhodi lakho lemfundo liza kubaluleka xa usebenza kumaziko.
Njengoko uzama ukujonga ukuba amanqaku akho alinganise kangakanani ukuba avumele abafundi kwinethiwekhi ye-CUNY, khumbula ukuba amanani angentla awalanga ibali lonke. Ama-25% abo bonke abafaki zicelo bafumana izikolo ze-SAT eziphantsi kweenombolo eziphantsi kwetafile. Amathuba akho yokwamkelwa ngokuqinisekileyo aphantsi kakhulu ukuba izikolo zakho ze-SAT zingaphantsi kwe-25 percentile, kodwa usenalo ithuba. Kufuneka uqwalaselwe isikolo se-CUN ukufikela ukuba izikolo zakho ze-SAT ziphantsi, kodwa unganqikazi ukusebenzisa kuphela ngenxa yokuba izikolo zakho azilungele.
Njalo uhlale ukhumbule ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Zonke ii-campus ze-CUNY zisebenzisa i-CUNY yesicelo.
Inkqubo yokungeniswa iphelele , kwaye amagosa adluliselweyo aya kukhangela isicatshulwa esomeleleyo yesicelo kunye neencwadi ezikhuthazayo zeencomo . Imisebenzi enomsebenzi ongezelelweyo yenkqubo ingakomeleza nesicelo kwaye uncede ukwenza ii-SAT izikolo ezingafanelekanga.
Kwi-front front, abantu abakwamkelwayo bajonga ngaphezu kwe-GPA yakho.
Baya kufuna ukubona ubungqina bempumelelo kwiiklasi zokulungiselela iikholeji. Iirekhodi eziphakamileyo eziphakamileyo zezikolo ziquka ukuPhakanyiswa okuPhambili, i-Baccalaureate yamazwe ngamazwe, iiNkcazo, kunye neeKlasi zokuBhalisa ezimbini.
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji eziphezulu zaseNorth Carolina
2015 SAT izikolo ngoRhulumente
Impuesto i-las ventas en EEUU: qhafaza i-imeyli ye-etiqueta
I-Royal St. George's Golf Club
Yintoni ongayenza Ukuba ukhangelelwa kwiGesi yokulila
1800 yeMbali yeMbali
Ingelosi yeNkosi yamnceda njani uHagare noIshmayeli?
Iimpawu ezichasene namaNerds - Yintoni eyahlukileyo?
10 Iinkcukacha NgeDilophosaurus
Iinkqubo zokudweba kunye ne-Software Software
Indlela yokugxininisa ekufundeni kwiiNqanaba ezintandathu
Iingoma eziMnandi kakhulu zeMatriki zee-1980s
Indlela i-Sociology ingakulungiselela ngayo ukusebenzela umsebenzi kwiCandelo likaRhulumente